Los Vascos Cabernet Sauvignon 2018 ~ ICT.com.mm
HomeLos Vascos Cabernet Sauvignon 2018
Los Vascos Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon Alcohol: 14% Dry/ 2018 Colchagua/ Chile Tasting Notes Deep and intense ruby red color. Aroma of plum and berries with savory hints of tabacco, toasted hazelnut... [Learn more]
Brand: Los VascosFilter by: FWM, Wine
Deep and intense ruby red color. Aroma of plum and berries with savory hints of tabacco, toasted hazelnut and dark chocolate. Lively tannins, nice structure andapersistent finish.
ချီလီနိုင်ငံထုတ် Los Vascos Cabernet Sauvignon 2018 ဝိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်အမေရိကတိုက်ရဲ့ နာမည်အကျော်ကြားဆုံးဝိုင်စပျစ်ခင်းတွေတည်ရှိရာ ချီလီနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း Colchagua Valley ဒေသမှာရှိတဲ့ Viña Los Vascos ဝိုင်လုပ်ငန်းကနေ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့နာမည်အကျော်ကြားဆုံး အနီရောင်ဝိုင်စပျစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Cabernet Sauvignon စပျစ်ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ အယ်လ်ကိုဟောပါဝင်မှု (၁၄)ရာခိုင်နှုန်း ရှိတဲ့ Dry/ 2018 ဝိုင်နီ (Bold & Structured) အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ သိုးကလေးသားကင်၊ အမဲသားကင်၊ Red Sauced ပါစတာ သို့မဟုတ် Veal Parmiggiano စတဲ့အစားအသောက်တွေနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ချီလီဝိုင်နီဖြစ်ပါတယ်။ Blue ချိစ်အပြင် အချို့သော ချိစ်အမာအမျိုးအစားတွေနဲ့လည်း တွဲဖက်သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။